मल्लोस डी रिग्लोस | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | Ecotourism, España
संसारसँग अनौंठो ठाउँहरू, स्थानहरू छन् जुन अज्ञातको कुशल र शैलीले भरिएको हातले कुँदिएको जस्तो देखिन्छ। यो कुरा हो मल्लोस डी रिग्लोस, ती आश्चर्यजनक र अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाहरू जुन स्पेनमा छन्।
सबै मल्लोहरूको नाम छ र पाठ्यक्रममा सम्पूर्ण क्षेत्र तपाईंलाई अभ्यास गर्न आमन्त्रित गर्दछ हिमाल गतिविधिहरु, त्यसोभए यदि तपाईं घर बाहिर जान र आफ्नो सीपलाई चुनौती दिन चाहनुहुन्छ वा अविस्मरणीय ल्यान्डस्केपको मजा लिनुहुन्छ, कसरी हिंड्ने बारेमा हुयस्का र तपाईलाई मल्लोस डि रिग्लोस थाहा छ?
1 मल्लोस डी रिग्लोस
2 माल्लोस डि रिग्लोस चढ्दै
तिनीहरू अवस्थित छन् ह्वेस्का प्रान्त रिग्लोस सहरमा। तपाईं तिनीहरूलाई पाउन केवल ues 45 किलोमिटर ह्युस्का शहरबाट नै प्रि-प्यारेनीसमा। रिग्लोस गोलेगो नदीको किनारमा निर्माण गरिएको एउटा आकर्षक शहर हो जुन एब्रोको मुख्य सहायक नदीहरू मध्ये एक हो र करीव १ 194। किलोमिटर लामो छ। यहाँ bare० जना मानिस बसोबास गर्छन् त्यसैले त्यहाँ बस्ने भन्दा अधिक पर्यटक वा पर्वतारोहीहरू छन्, तर भाग्यवस त्यो उपचारको दयाबाट हटाइएको छैन।
स्पष्ट रूपमा रिग्लोसको मुख्य आकर्षण खराब मान्छेहरू हुन्। भूवैज्ञानिकहरू भन्छन् कि यी विशिष्ट उचाइहरू पाइरेनीसको उचाईको परिणाम स्वरूप गठन गरिएको हो र ती बोल्डरहरू, बालुवा र बजरी तलका मिलेर बनेको छ।
यस्तो देखिन्छ कि जब पहाडको दायरा सिर्जना गरिएको थियो, भूक्षयले ठूलो मात्रामा सामग्रीलाई नदीको खाटबाट एब्रो तर्फ तान्नका लागि बनायो तर तिनीहरू त्यहाँ जम्मा गरियो र त्यहाँ अवस्थित थिए। विशाल ट्या tan्क अन्ततः उठ्यो र तिनीहरू हावा र पानीको कटाईले कुँदिएका थिए उनीहरूले हालको फाराम लिन सकेसम्म चिमनीहरूले भरिएका छन्।
जस्तो कि हामीले सुरूमा भनेका थियौं त्यहाँ धेरै मल्लोहरू छन् र हरेकको आफ्नै नाम छ। केहि अवस्थाहरूमा यी चीजहरूको समानता (चाकू, स्क्रू, भिसेर) मा उनीहरूसँग चल्ने व्यक्तिहरू वा रिग्लोसको पुराना घरहरू जस्तै पिसेन र फिरी जस्ता हुन्। हामी सक्छौ तिनीहरूलाई तीन ठूलो समूहमा समूहबद्ध गर्नुहोस्: ठुलो, सानो र तथाकथित फिलहरू।
यस बीच ठूलो नराम्रो तिनीहरू हाइलाइट गर्छन् राम, the पुरो, the Firé पाँच बिन्दुहरू सहित, क्यास्टिला, द चाकू, राम्रो गरीएको, द फ्लाईउदाहरणका लागि, भिसेर, फ्रेचेन र पानी। बीचमा सानो Baddies छन् हेरेरा, ला मग्दालेना, एल कोलोराडो, एल चिचिन, ला रातो पानी, सक्षम वा Cored, उदाहरण को लागी।
अर्कोतर्फ Massif d'os Fils, Peña don Justo साथ क्षैतिज स्तरीकरणको, पेच र पेचर गिद्धहरूको भित्ता, कहिलेकाँही मल्लो अर्काज पनि भनिन्छ। सत्य यो हो कि जे पनि अचम्मको छ। Riglos सबै mallos प्रभावशाली हो किनभने यसको ठाडो पर्खालहरू meters०० मिटरसम्म पुग्न सक्छs र तिनीहरू अवस्थित भएको ठाउँमा पोष्टकार्डलाई अझ बढी सजावट गर्छ किनभने तिनीहरू शहरको छेउमा अवस्थित छन् र जेलोवे नदी आफैं नै। तिनीहरू विश्वास गर्दैनन्।
यस प्रकारको स्थानले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्दछ जसले पहाड चढ्न वा प्रकृतिलाई सामान्य रूपमा प्रेम गर्दछ। आकर्षण १ th औं शताब्दीमा जन्म भएको थियो तर आज पनि धेरै जीवित छ। र सबै भन्दा राम्रो कुरा त्यो हो केही मल्लोहरू चढ्नका लागि दक्ष पर्वतारोही वा पर्वतारोहण हुन आवश्यक छैन किनकि कोहीहरू हिंड्न सक्ने छन्। यो मल्लो डेल अगुआ, पेरेडिन दे लस बुइट्रेस, मेलचोर फ्रेचिन, भिसेरा वा मसिफ डी'ओस फिलहरूको मामला हो।
माल्लोस डि रिग्लोस चढ्दै
नराम्रो मान्छे तिनीहरूसँग विभिन्न कठिनाइहरूको धेरै मार्गहरू छन् तर तपाईं राम्रो शारीरिक अवस्था मा हुनु पर्छ। मल्लोस को सडकहरु, तिनीहरूको उपकरण, तिनीहरू धेरै परिवर्तनशील छन् (त्यहाँ सुपर आधुनिक र अन्य बुनियादी क्लासिक छन्), त्यसैले यदि तपाईं एक आरोहण गर्ने योजना बनाउनु हुन्छ भने, तपाईंलाई अचम्म लाग्न अघि आफैंलाई राम्रोसँग सूचित गर्न सुझाव दिइन्छ।
यस बीच खराब व्यक्ति तपाईं चढ्न सक्नुहुन्छ निम्न छन्: मल्लो फायर (दुई तरिकाहरू छन्), भिजर (एकल ट्र्याकको साथ), यो मल्लो मेलचोर फ्रेचेन (चार ट्र्याकहरूको साथ), यो मल्लो पिसो चार ट्र्याकहरूको साथ), यो कोलोराडो, यो जान्न योग्य छ कि यो एक सजीलो र सब भन्दा सानो mallos हो, र १२० मिटर भन्दा धेरैको धेरै मार्गहरू राम्ररी सुसज्जित छन्, र रातो सुई यसको ट्र्याकको साथ यसको १ meters० मिटरको साथ। यो मल्लन र कोलोराडो कम उचाई रुचाउने पर्वतारोहीहरूको बीच सबै भन्दा लोकप्रिय छ।
त्यहाँ दुई आश्रयहरु छन् जहाँ तपाईं सुत्न वा आराम गर्न वा शिविर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हो गोमेज लागुना शरण जुन रिग्लोस हेमलेटको धेरै प्रवेशद्वारमा अवस्थित छ। यो आवासमा एक पट्टी र क्याफेटेरिया दिनभरि खुला रहन्छ, खाजा र बेलुकाको प्रस्ताव राख्छ र बच्चाहरूको मेनु छ। थप रूपमा, यसको एक उत्कृष्ट टेरेस छ गौरवशाली दृश्यको साथ। यदि तपाईं यस शरणस्थानको वेबसाइट भ्रमण गर्नुहुन्छ, फाइदा लिनुहोस् र Baddies हेर्न अनलाइन वेबक्याम हेर्नुहोस्। हरेक घण्टा अपडेट भयो!
यस २०१ for को लागि दरहरू के हो? १rat यूरोमा फरराटा मार्फत पूरा उपकरण भाँडामा र individual यूरोका लागि प्रत्येक व्यक्तिगत आईटम। भाडा उपकरणमा हेटसिink्क, हेलमेट र दोहोरिनको साथ एन्कर लाइनहरू हुन्छन्। नुहाउन बिहान am देखि साँझ pm बिच को बीचमाeयूरो चार्ज गरिन्छ। आवास आफैंको मामला मा, यो दुई प्रकारको कोठाहरु को लागी प्रदान गर्दछ, एक बs्क बेड संग आठ बेड र दुई डबल कोठा। तिनीहरूले पानाहरू, कम्बल र हीटिंग समावेश गर्दछ।
अर्कोतर्फ, यो शरण बाहेक त्यहाँ क्याम्पसाइट छ: क्याम्पिंग अरमालीगल। यो एक दिगो, पर्यावरणीय क्याम्पसाइटको साथ छ बंगलाहरू, पूल, बार र रेष्टुरेन्टहरू। यो जरागोजाको मुरिलो डे गल्लेगोमा छ र शिविरको लागि प्रति वयस्क night.5। युरो, प्रति रात, र चार व्यक्तिको बंगलाको लागि १० 95 युरो लिन्छ। भ्याट समावेश
रिग्लोस पुग्न धेरै सजिलो छ। यो गाउँ मुरिल्लो दे गोलेगो र ह्युस्का प्रान्तको ऐयर्बेको बीचमा अवस्थित छ र यो २ National० किलोमिटरको घुमाउरो बाटोमा लिएर राष्ट्रिय २ 240० को बाटो भएर पुग्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » मल्लोस डी रिग्लोस